Aqoonkaab Qiso Wax ku Qaadasho Mudan | Aqoonkaab
Qiso Wax ku Qaadasho Mudan
May 16, 2016Arrimaha bulshada
Boqor talyaani ah ayaa wuxuu ka dalbaday, nin farshaxanyahana ama arts ah inuu sawiro laba sawir oo aad u kala fog.
Wuxuu ka dalbay inuu sawiro laba qof oo mid wajigiisa laga dheehan karo sawir malag, ka kalena wajigiisa laga dheehan karo sawirka shaydaanka, si dadku ukala arkaan samaha iyo xumuhu intay isu jiraan.
Wuxuuna sheegay boqorku in labada sawir lagu dhajin doono,albaabka laga soo galo caasimada dalka.
Ninkii farshaxanyahanka ahaa wuxuu guda galay inu baadho laba qof oo uu sawiro, wuuxuna ku horeeyay siduu u heli lahaa qofku wajigiisa ka dheehan lahaa, sawirka malaga.
Muddo ka dib wuxuu helay ilmo yar oo qurux badan oo waji yar oo cad oo goobo ah leh, indhihiisana laga dheehanayo farxad badan iyo danbi la,aan.
Bil ka dib sawirkii ayuu diyaariyay, wuxuuna noqday sawirkii uugu quruxbadnaa ee qof gacantiisa ku sawiro.
Intaa ka dib wuxu guda galay inuu baadho qof uu wajigiisa, ka dheehan karo sawirka shaydaanka, in badan ayuu raadiyay oo raadiyay ilaa ay ku qaadatay labaatan sanno.
Ka dib boqorku wuxuu ka baqay inu ninkan farshaxanyahanka ahi dhinto, isaga oo aan wali sawirkii sawirin, sidaa awgeed boqorku wuxuu abaal marin u balan qaaday, qofka wajigiisu u ekaado sawirka la doonayo.
Ninkan farshaxanyahanka ah wuxuu booqday jeelasha, meelaha lagu hayo dadka dhimirka, baararka, iyo dadka danbiyada waawayn galay meelaha lagu hayo, laakin kulligood dad caadiya ayay ahaayeen, manay lahayn waji laga dheehan karo sawirka shaydaanka.
Maalin maalmaha ka mid ah si lama filaan ah ayuu ninkii farshaxanyahanka ahaa u helay (shaydaankii) uu doonayay, wuxuuna ahaa nin fool xun oo dhalo kahmri ah ku cabaya, koorne cidhiidhi ah oo kuyaal baar qadhmuun badan gudihii.
Ninku nin aad u fool xun ayuu ahaa, ur qadhmuunna leh, wax uu aduunka dan ka leeyahayna aanay jirin, dhaladaa khamriga ah mooyaane, markuu hadlayana aad u qaylinaya, afkiisuna uu madhanyahay oo aanay ilka ku ool, madaxan bidaar ku leh, iyo laba tin oo ku sii dul yaal bidaarta oo la moodo labadii gees ee shaydaanka.
Ninkii farshaxanyahanka ahaa ninkii ayuu u sheegay danta uu leeyahay iyo in haddii uuu ogolado in uu sawirka ka qaado, la siin doono abaal marin, waanu ka yeelay.
Ka dib wuxu guda galay inuu sawiro ninkii, maalin maalmaha ka mid ah isaga oo sawiraya ayaa wuxuu arkay , ilmo kasoo daadatay ninkii sahydaanka laga dheehanayay wajigiisa, wuu yaabay ninki farshaxanka ahaa wuxuuna waydiiyay inu rabo inu sigaar cabo iyo in uu rabo in uu u keeno dhalo khamri ah.
Wuxuu ugu jawaabay isaga oo aad u ooyaya hadalkana aan karin …adigu mudane hadda ka hor waxaad isoo booqatay anigoo ilma yar ah, labaatan sanno ka hor, waxaanad iga qaaday sawir aad aad wajigayga ka dheehanaysay, sawirka malaga , maantana waxaad isla anigii wajigayga ka dheehanaysaa sawirka shaydaanka, labada jeerba waa isla anigii , laakiin waayaha dunida ee arxanka daran, ayaa sidaa ii galay.
Ilaahay dadka yaga oo wada wanaagan ayuu abuuray, laakiin dad badan duruufaha ku xeeran ayaa bedela,kana dhiga waxay ahaayeen wax ka soo horjeedaa.
QISADAN WAXA CARABI KA SOO TARJUMAY ANIGA OO AH JACFAR SH YUSUF.
Previous Post6-Qodob Oo Aad Ku Baran Doontid Xikmado Noloshaada Muhiim U ah Next PostXuquuqda Muslimiintu isku leeyihiin